Erayada Lagaga Fogaado Emailada | Martech Zone
Erayada Lagaga Fogaado Emailada
Isniin, February 13, 2012 Axad, Febraayo 12, 2012 Douglas Karr
Waxaan wax yar ka fiicnaaday dhaqamadayda emailka ka dib markaan aqriyay anigoo arkaya sawirradan Boomerang. Celceliska isticmaalaha e-maylku wuxuu helaa 147 farriin maalin kasta, wuxuuna ku bixiyaa wax ka badan 2 iyo badh saacadood oo emayl ah maalintii. In kasta oo aan jeclahay emayl ahaan mid dhexdhexaad ah oo aan ka shaqeyno sidii aan ula midoobi lahayn istiraatiijiyad dhammaan macaamiisheena, tirakoobyada noocan ah waa inay kaa nixiyaan inaad wax ka beddesho dhaqanka suuqgeynta emailkaaga.
Your iimayl bixiyaha suuq geynta waa inuu bixiyaa qeyb iyo jadwal si aad u yareysid tirada fariimaha aad u direyso aadna aad u bartilmaamedsato… helitaanka kalsoonida iyo dareenka macaamiishaada. Horumarinta dhacdooyinka farriimaha adag iyo kicinta sidoo kale waa lagu gaari karaa iyadoo la adeegsanayo a suuq-geynta suuqa matoor.
Si kastaba ha noqotee, waad iska ilaalin doontaa inaad si fudud u buuxiso email kasta oo qashinka ah… ama ka xun… galka qashinka emaylka!
Infograafigani wuxuu ka yimid Boomerang, Fariin email ah oo loogu talagalay Gmail. Boomerang, waxaad ku qori kartaa emayl hada jadwalna ugu dhigtaa in si otomaatig ah laguugu soo diro waqtiga ugu fiican. Kaliya u qor farriinta sidii caadiga ahayd, ka dib riix badhanka Dambe U dir. Isticmaal kaarka jumladaha waxtarka leh ama sanduuqayaga qoraalka oo fahmaya luqadda sida "Isniinta soo socota" si aad ugu sheegto Boomerang goorta aad dirayso farriintaada. Halkaas ayaynu ka soo qaadanaynaa
Tilmaamaha Mushaaraadka ee Warbaahinta Bulshada
3 Siyaabood oo Loogu Adeegsado Sahaminta Daraasad Suuqeed Wanaagsan
Febraayo 13, 2012 saacadu markay tahay 11: 10 AM
Haddii helitaanka 12 farriimood loo tarjumo 90 daqiiqo oo shaqo ah, maxay taasi dhab ahaantii ka dhigan tahay? Oo muxuu uga shaqeyn lahaa barnaamijyada aan ka ahayn barnaamijka emaylka laftiisa inuu qayb ka noqdo macluumaadkaaga ku saabsan emaylka?
Febraayo 13, 2012 saacadu markay tahay 11: 18 AM
Salaan @ariherzog: disqus! Waxaan halkaan ku wadaageynaa Boomerang's infographic halkan oo aan ka faallooneyno… annagaa leh ma nihin. Shaqada emaylka ka baxsan, waxaan aaminsanahay inay isku dayayaan inay eegaan dadaalka dheeriga ah ee loogu talagalay celceliska isticmaalaha marka la akhrinayo emaylka. Emailada aan helno waxay naga rabaan inaan shaqeyno kahor jawaab celinta. Taasi waa qodobka. Xaaladda marka la eego, waxaan helay qoraalkaaga oo ah emayl ahaan, oo iga baahan inaan dib u eego mar labaad oo aan kaaga jawaabo. In kasta oo taasi aysan ahayn shaqo-ku-dirirka emaylka, waxaa loo sameeyay iimaylka aniga daraadday.
Feb 13, 2012 markay ahayd 1:40 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida shabakadeena Doug. Lemon.ly wuxuu waqti fiican la qaatay wada shaqeynta Boomerang.
Febraayo 15, 2012 saacadu markay tahay 11: 12 AM
Shaki kuma jiro inaan dhammaanteen ku buux dhaafnay sanduuqa emaylkeena. Taasi waa sababta ay muhiim ugu tahay ganacsatada inay jaraan buuqa. Ogaanshaha waqtiga la dirayo ayaa waxtar leh. Tijaabi si aad u ogaato waqtiga ay natiijadu tahay heerka ugu fiican ee furan.